प्याकेटको जुस पिउनुहुन्छ ? स्वास्थ्यलाई हानि हुन्छ है | OB Media
प्याकेटको जुस पिउनुहुन्छ ? स्वास्थ्यलाई हानि हुन्छ है
प्रेम देवान | ५ चैत्र २०७५, मंगलवार ०६:४३
एजेन्सी । गर्मी लागेपछि मानिसहरूको खानपानमा पूर्ण परिवर्तन आउँछ । शीतल गर्ने कुराहरू खान र पिउन मन लाग्छ मान्छेलाई । बच्चादेखि बूढासम्मले आइसक्रीम, सफ्ट ड्रिंक र जुस पिउन मन गर्छन् ।प्याकेटको जुस पनि भरमार बिक्छ गर्मीमा । यस यस्तो प्याक्ड जुसले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दैन ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार प्याकेटको जुस धेर गुलियो हुनाले बच्चाहरूको शरीरमा चिनीको मात्रा बढाइदिन्छ । यसले गर्दा मोटोपना हुन्छ । यसको साटो फलफूलको ताजा जुस, दही र लस्सी खानु ठीक हुन्छ । कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न तथा एसिडिटीबाट राहत पाउन लस्सी राम्रो हुन्छ ।
प्याकेटको जुसमा पोषक तत्त्व हुँदैन । यस्तो जुस बनाउनुअघि फलहरूको रसलाई उमालिन्छ किनकि ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी उमाल्दा भिटामिन लगायतका पौष्टिक तत्त्व पनि नष्ट हुन्छन् । अनि शरीरले फाइबर पाउँदैन । जुसको साटो सिधै फल खानुभयो भने पोषक तत्त्व पनि पाइन्छ, फाइबर पनि ।
अनि प्याकेटको जुसले मोटोपना बढाउँछ । यसमा प्रशोधित चिनी प्रयोग गरिने हुनाले मधुमेहका रोगी त पिउनै हुँदैन । सुगर फ्री भनेर प्रचार गरेको जुस पनि मधुमेहको रोगीले नपिएकै बेस । जुसमा कृत्रिम रंग प्रयोग गरिएकाले हानि गर्न सक्छ ।
यस्ता जुसमा सर्बिटल जस्तो चिनी राखिएको हुन्छ जुन सजिलै पच्दैन । सर्बिटल भनेको कार्बनसहितको अल्कोहल हो र मिठास ल्याउनका लागि यसको प्रयोग हुन्छ । कृत्रिम मिठास आजकल धेरै कुरामा प्रयोग हुन्छ । पञ्जाब केसरी
सुनसरीकाे भाेक्राहामा आगलागी, वाैवालालकाे घर जल्याे
विराटनगर दमकलमा आगलागीकाे अबस्थामा फाेन नउठ्नु र दमकल ढिला पुग्नुकाे यस्ताे कारण
वर्षा रोकिएपछि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सर्पको बिगबिगी
गरिखानेको कथा : बाख्रापालनमा वडा अध्यक्ष, बार्षिक ५० लाख आम्दानी !
विराटनगरको महेन्द्र चोकमा रहेको मोवाईल पसलबाट करिब १२ लाखको सामान चोरी
विराटनगरका बाढी पीडितलाई राहत एक अँजुली भुजा, सेल्फी मोह बढी
मुख्यमन्त्री कप प्रदेश लिगको फाइनल झापाको सैनिक युथ क्लबले जित्यो
भोजपुरमा पोखरीमा डुबेर दुई जना युवाको मृत्यु
१ श्रावण २०७६, बुधबार १२:३६
१ श्रावण २०७६, बुधबार १०:३६
१ श्रावण २०७६, बुधबार १०:१३
१ श्रावण २०७६, बुधबार ०९:५९
१ श्रावण २०७६, बुधबार ०९:४७
१ श्रावण २०७६, बुधबार ०६:२४
लागुऔषधसहित विराटनगरबाट सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवल्दार पक्राउ
३१ असार २०७६, मंगलवार २१:१५
साईकलबाट लडेका सुनसरीका अक्षयकुमारको ज्यान गयो
३१ असार २०७६, मंगलवार २०:३४